४ जना एसिडपीडितलाई रोजगारी - Dial 100 News
मङ्ल, कार्तिक ४, २०७७
प्रहरी हत्या प्रकरणः यी हुन् हत्यामा संलग्न ७ जना, हत्या गरेको स्वीकारे !
ईटहरीबाट ९ जुवाडे पक्राउ !
थप ३ हजार ९३ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ लाख ३९ हजार १२९ पुग्यो
अत्यावश्यक नभई घरबाहिर ननिस्कन काठमाडौं प्रशासनको आग्रह
भियतनाममा बाढी: ९० जनाको मृत्यु, ३७ हजार घरमा क्षति !
अपहरित आठ वर्षीय बालकको साढे दुई घण्टामा सकुसल उद्दार, तिन जना पक्राउ
प्रहरी असइ हत्या प्रकरणः वेपत्ता जवानको शव पनि भेटियो !
थप एक सङक्रमित महिलाको मृत्यु, बुटवलमा मृतकको संख्या ३५ पुग्यो !
प्युठानमा बस दुर्घटना: एकको मृत्यु, ३ जना गम्भीर घाइते !
आपरेसन ‘रिचार्ज कार्ड’ : ठिमी बृतबाट चोरी भएका ४ मोटर्साइकल सहित ३ जना पक्राउ !
आचरण ठिक नभएको भन्दै पत्रकार खेमराज खनालको ‘नेपाल प्रहरी स्मारक गुठि’ सदस्यता खारेज
४ जना एसिडपीडितलाई रोजगारी
काठमाडौं । एसिड आक्रमणमा परेका ४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तीन जनाले कुमारी बैंक र अर्का एकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चालकका रूपमा रोजगारी पाएका हुन् ।
कुमारी बैंकले एसिडपीडित दुई युवतीलाई उपत्यका र एक जनालाई हेटौंडास्थित शाखामा ‘मार्केटिङ म्यानेजर’ का रूपमा आइतबार नियुक्त गरेको हो । रोजगारी पाउनेमा हेटौंडाकी विन्दबासिनी कंसाकार तथा काठमाडौंमा बस्दै आएका जेनी खड्का र संगीता मगर छन् ।
यस्तै, श्रीमतीबाट एसिड आक्रमणमा परेका नुवाकोटका रामराजा थापालाई महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असोज १ बाट पारिश्रमिक गणना हुने गरी करारमा चालक नियुक्त गरेका छन् ।
बैंकले तीनै जना युवतीलाई सुरुमा १ महिनाका लागि करारमा भर्ना गरेको छ ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी नियुक्ति दिइने बैंकले जनाएको छ । हेटौंडाकी कंसाकारमाथि २०७० वैशाख ९ मा पसलमा बसिरहेको अवस्थामा भारत महाराजगन्जको अमरपूर्वन–६ का राज भनिने दिलीपराज केशरीले एसिड प्रहार गरेका थिए ।
२०७१ फागुन १० मा एसएलसी परीक्षाका लागि ट्युसन पढ्न निस्किएकी संगीता मगरलाई काठमाडौंको वसन्तपुरमा रामेछाप फुलासीका जीवन विकले एसिड छ्यापेका थिए । २०७६ जेठ २ मा कालोपुलमा काभ्रे फूलबारीकी जेनी खड्कामाथि सोही ठाउँका विष्णुबहादुर भुजेलले एसिड आक्रमण गरेका थिए ।
विदुर नगरपालिका–१३ घर भई काठमाडौंको बालाजु बस्दै आएका २७ वर्षीय रामराजा थापालाई उनकै श्रीमती प्रतिमा थापाले २०७६ फागुन २६ मा एसिड प्रहार गरेकी थिइन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्न सक्छ, यी ब्राण्डका स्यानीटाईजरदेखि सावधान !
नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न ६० जनालाई पक्राउ गर्न सीआईबीमा पत्र !